Kuwedzera Catfish Zvipfuwo Zvakagadzirwa Nezvirwere Zvirwere Yurie BSF
Yurie | 7 Sea, 2019 | Catfish Probiotics | 0 mashoko
Kuwedzera Kubudiswa kweCatfish neProbiotics?
Zvirongwa zveprobiotics rudzi rwemuumbi unowanikwa mukudya. Zvirongwa zveprobiotics hazvigoni kugadzirwa, zvinokurudzira kukura uye kukura kwe microoraganism zvose mumagetsi. Kugadziriswa kwehove prebiotics kunoshandisa kuvepo kwehutachiona uye hutachiona mukudya kunoramba kuchienzanisa uye kuderedza kupinda kwevirusiki. Pasi apa zvichakurukurwa nezvezvipfuwo / nekurima zvebibiki zvinonzi probiotic catfish, zvichiita mapurobioti echikafu, kupa maprobioti, nemigumisiro yepbiotic pane catfish.
Zvirongwa zveprobiotics zvinoshandiswa zvakanyanya mumvura yakadzika nechinangwa chekuchengetedza nekuvandudza unhu hwemvura huchanyatsogadzirisa hutano hwehove dzakarimwa. Zvisikwa zvidiki zvingashandiswa uye zvinoshandiswa pakuita mapurobioti kwete kungobva mabhakitiriya Bacillus Thiobacillus, asiwo kubva Sacharomices cerevicae, uye Tetraselmis sp. Zvimwe zvikomborero zveRpobiotik zvinotevera:
kuenzanisa micro flora
kuvandudza unhu hwemvura
inhibits pathogen development
kuwedzera kukosha kwezvokudya zvekudya
kuwedzera kukura kwehove
kuwedzera hove kudzivirira zvirwere
kunatsiridza hove dzenzymine nekudya
Nzira Yokuita Organic Catfish Probiotics
Jurigen ukuru 30 liter
20 malita emvura yakachena
EM4 200 cc inopera mumvura zvakakwana se200 liter
2 Yembiriso inogadzirisa zvinyorwa zvakanyatsonaka
2 bothod yakult
shuga yakasviba 1kg iyo yave yakabikwa uye yakasanganiswa mumvura yakawanda seyena 2 litita emvura.
Pineapple mvura yakachena (michero 1)
Steamed 2 kg yebazi rakanaka
1 / 4 kg turmeric inopararira
Curcuma 1 / 4 kg yakapararira
50 garlic grated
Birai turuki, ginger, uye garlic, uye tsvuku tsvuku yemvura, ipapo futa uye inotonhora.
Wedzera uye sanganisira zvose zvinoshandiswa mumudziyo
Sungai zvakanaka zvose zvinoshandiswa
Kana wapedza, saka kuoma
Swedera zvakasimba, uye dzimwe nguva uzarure chivako
Kupera kwemavhiki e1
Usaisa pachena kune chiedza chezuva
Kupera kunoitwa kwemazuva 7-10.
Probiotics for catfish
Zvirongwa zveprobiotics zvinogona kupiwa kumakungwa echikwata pamusana we6ml / m3. Inogonawo kugoverwa nekusanganiswa mune zvekudya zvekate rako. Shamba 1 tablespoons ye probiotiki yakasanganiswa ne 1kg pellet feed. Kazhinji unogona kupa Probiotics nenzira dzinotevera:
Sakanisa mapurobioti wawakaita muhove yehove. Izvozvo zvinonzi probiotiki zvakagadzirwa zvakakwana zvinodururirwa mumadziva emvura yose 1 vhiki 2 nguva. Chinangwa cherabioti ndeyekuchengetedza unhu hwemvura kuitira kuti nguva dzose igare yakachena uye ine utano. Kuzadzwa ne plankton sekudya kwechisikigo uye kuenzanirana kwezvisikwa mugungwa. Zvirongwa zveprobiotics zvinogona kushandiswa kusunungura ivhu kana rakashandiswa pasi pegomba, zvimwe kunze kwechikonzero chekudya.
Iwe unogonawo kusanganisa probiotics nefurairo, kushandisa maitiro anonzi probiotics akavhenganiswa nekatefish feed. Chinangwa chekubatanidza maitiro anonzi probiotics nehove pellets ndekuita kuti hove dziwane zvokudya zvine bhakitiriya inobatsira sezvaidiwa. Probiotics inopiwa kunze kwekusimudzira kukura uye kukura kwehove, inogonawo kudzivirira catfish kubva pakuonekwa kune zvisikwa uye kushungurudzika. Mukuwedzera pakusimudza uye kukura hove, mapurobiotics anogona kushandiswawo kune catfish vacheche. Zvinotarisirwa kuti kukura nekutsungirira kwemakwenzi echikafu zvichave zviri nani uye kufa kwehuwandu huri pasi, nehuwandu hweprobiotics.
Migumisiro yeProbiotic Kupa Catfish
Migumisiro yekupa probiotiki kune catfish yako ndeyotevera:
Inowedzera uwandu hwekambani yemakwenzi
Zvitsva zvekudyisa zvinyorwa uye kuparara
Dzivisa zvipembenene uye zvirwere
Catfish inonyanya kuoma, ine utano uye yakasimba.
Pombi mvura haina kunhuwa
Chengetedza pane mari yekudyisa